Al-Shabaab oo weerar culus ku Qaaday Deegaanka Goof-Gaduud Buurey ee Gobolka Baay | HalQaran.com
Al-Shabaab oo weerar culus ku Qaaday Deegaanka Goof-Gaduud Buurey ee Gobolka Baay
Baydhabo (Halqaran.com)- Dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa maanta waxaa ay weerar ku qaadeen degaanka Goof-Gaduud Buureey, oo hoosyimaada magaalada Baydhabo ee Caasimda KMG ah ee Maaamulka Konfur Galbeed Soomaaliya.
Dagaalkan ayaaa waxaa uu ka dambeeyay kadib markii Al-shabaab ay weerar dhow jiho ah ay ku qaadeen Saldhig Ciidanka Koonfur Galbeed ay ku ku leeyihiin deegaanka Goof guduud Buureey.
Dadka deegaanka ayaa soo sheegaya in dagaal la isku adeegsaday hubka noocaydiisa kala duwan uu dhexmaray labada dhinac, isla makaana uu ka dhashay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac.
war qoraal ah oo ka soo baxay Al-shabaab, ayay ku sheegteen in ay lawareegeyn degaanka Goof-Guduud Buurey, islamarkaana ay khasaare culus gaarsiiyeen ciidamada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Sido kale Al-shabaab waxay qoraalkooda ku sheegteen, in ay dileen ugu yaraan 8 askari oo ka tirsan ciidamada Koonfur Galbeed.
Hayeeshee ma jiraan weli wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, marka laga reebo sheegashada alshabaab.